घर कत्रो हुनुपर्दछ ? - LiveMandu
घर कत्रो हुनुपर्दछ ?
मान्छेको जिवन र उस्को बस्ने ठाँउको जमिन या ठाँउ बिचको समन्ध दिनानुदिन बिषयगत हुँदै गएको पाइन्छ । एउटा मान्छेलाई खुशी बन्न कति ठाँउ चाहिन्छ या अर्को हिसाबमा कति ठाँउमा बस्दा या स्वामित्व ग्रहण गर्दा एउटा मान्छे खुशी हुन सक्दछ ?
नेपाली समाजले घरलाई खुशी र सम्पतिको मुख्य कडिका रुपमा राखेको छ, के बास्तवमा नै ठूलो घर नै खुशीको प्रतिक हो त ? कसैले जाँचेको छ र ?
ठूलो घरमा बस्ने सबै खुशी हुन्छन् या हरेक खुशी मान्छेहरु ठूलो घरमा नै बस्छन् भनेंर ?
अमेरिकाका मल्टी मिलियनर स्ट्रोसाइसिस्ट तारापुञ्जका अध्यनकर्ता स्टेभेन हफ ले मिसाउरीमा ठूलो ५ तल्लाको घर बनाएका छन्, त्यसमा १३ वटा शौचालय र १४ वटा बाथरुम छन् । त्यस्तै जापानमा जमिन र ठाँउको अभावमा अधिकांश मान्छेहरु केवल १८२ स्क्यावयर फिटमा माइक्रो घरहरुमा बस्दछन् । यी घरहरुमा एउटा डेस्क कम्प्यूटरले लगभग एक तिहाईको भाग ढाक्ने गर्दछ । खाटमा सानो तकियालाई माथि भित्तामा झुण्ड्याइन्छ ताकि सुत्ने मान्छेले आफ्नो गोडा तन्काउन सकुन् । दुईवटा भित्तामा जोडेर लुगा झुण्ड्याउने डोरी बाँधिएको हुन्छ भनें भान्सामा एउटा सिन्क, एउटा मुख भएको इन्डक्शन कुकर र सानो बेसिन राखिएको हुन्छ ।
पश्चिमा सभ्यतामा ठूला घरहरुलाई सम्पन्नतासंग जोडिन्छ जबकि पूर्वि सभ्यताको जडमा यो तुलना कहिले थिएन । जापानी जिवनशैली जेन दर्शन पाइन्छ, जेनका अनुसार एउटा मान्छेलाई उभिन आधा गुन्द्रि र सुत्न पुरा गुन्द्रि भए पुग्दछ ।
अब के ठूला घरमा बस्ने अमेरिकी मिलिनायरहरु जापानी भन्दा खुशी छन् त ? के ठूला घरहरुमा बस्ने मनहरु पनि खुकुलो र ठूलो छन त?
यसै वर्ष ब्रिगम योगं विश्वविधालयले गरेको अध्यन अनुसार हामी जति आफ्नो घरप्रति सकारात्मक सोच्दछौं त्यति नै हामी घरमा खुशी हुनसक्दछौं । यस सकारात्मक सोच र खुशीमा घरको आकार र अवस्थितीको कुनै भूमिका नहुने देखिन्छ । उल्टै प्रतिव्यक्ति ठाँउ कम भएको घच्चाघमाशान घरहरु झन खुशी हुने पाइयो, घरको फराकिलो ठाँउमा खुशी लुकेको हुँदैन । घरलाई समबन्धको धनत्व र परिवारको प्रकृतिले मात्र खुशी दिने स्पष्ट छ ।
घरको फराकिलोपना केवल मानसिक संरचना र सोच मात्र हो, जब मान्छे आँफैंमा खुशी हुन्छ तब उस्ले आफ्नो अवस्थिती भन्दा माथि परिकल्पना गर्न र दर्शनहरु बुझ्न सक्दछ । तसर्थ घरको लालसामा खुशी देख्नु केवल मिथ्या र मृगतृष्णा मात्र हुन सक्दछ है ।
अष्ट्रेलीयाको पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा बिरोघ स्वरुप नबुझिने कालो अक्षर
विदेशबाट फर्कीएर मुसहर युवाले निःशुल्क शिक्षा दिंदै
प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’लाई जन्मथलो पोखरामा सम्मान
सूर्य इन्टरनेशनल अवार्ड दोस्रो शृंखलाको उत्कृष्ट ३ सार्वजनिक
जापानका राजाको राज्याभिशेक
हेगस्थित साउदी दुतावास भएको गल्लीको नाम खसोग्गी गल्ली राखियो
ओई तिम्रो छ कि छैन कोई युटुवको ट्रेन्ङ्गिमा
ब्ल्याक होल, प्राचिन बिज्ञान अनि आधुनिकता
काली केटि को सुन्दरता